जमेको काने गुजीलाई निकाल्न चाहानुहुन्छ ? यो विधि अपनाउनुहोस् सुन्ने शक्ति बढ्छ दुई गुण ! – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /स्वास्थ्य/ जिबनशैली/जमेको काने गुजीलाई निकाल्न चाहानुहुन्छ ? यो विधि अपनाउनुहोस् सुन्ने शक्ति बढ्छ दुई गुण !
पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए ४ सय २६ सं,क्रमित
एचआईभी जस्तै कोरोना भाइरस पनि कहिल्यै अन्त्य नहुने खुलासा (पूरा हेर्नुहोस )